Nepal Dayari | कहिले हुन्छ सिईडिबि हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड? यस्तो छ सूचना!
बैसाख २६, २०७८ आइतबार ४३० पटक हेरिएको
सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि बिक्री तथा निष्काशन गरेको साधारण शेयरमा ११.२४ गुणा बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीले २५ करोड १८ लाख २३ हजार बराबरको २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता आईपीओ विक्री तथा निष्काशन गरेको थियो।
कम्पनीको शेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले भाग्यमानी आवेदक २ लाख ३४ हजार १९५ जनाले मात्रै न्युनतम १० कित्ताका दरले शेयर पाउनेछ । बिगुल न्युज बाट